Ny fiantraikan'ny adin'ny fahefana amin'ny mpivady | Bezzia
Ny fiantraikan'ny adin'ny fahefana amin'ny mpivady
Maria Jose Roldan | 08/06/2021 22:00 | fifandraisana
Matetika ny herinaratra dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fifanolanana na ady amin'ny mpivady maro. Ny tolona herinaratra dia mitohy sy mahazatra, zavatra tsy mahasoa ny mpivady mihitsy. Vao mainka miharatsy ny raharaha rehefa ampiasain'ny antoko hahazoany tombony manokana izany ary tsy ampiasainy hanatsarana ny fifandraisana amin'ny antoko hafa.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny tolona fahefana ao amin'ny mpivady sy manimba ny fifandraisana izany.
1 Ny tolona hahazoana fahefana amin'ny mpivady
2 Olana noho ny adim-pahefana eo amin'ny mpivady
Ny tolona hahazoana fahefana amin'ny mpivady
Tsy asa mora na tsotra ny fizarana fahefana ao anatin'ny mpivady. Mila mihevitra ny filan'ny olona roa ianao ary raha tsy mitranga izany dia inoana fa hiafara amin'ny ratsy ny raharaha. Ny zavatra mahazatra dia ny fandehan'ny fotoana, ny hery voalaza etsy ambony dia ampitahaina ary ny olona tsirairay dia mampiasa azy io amin'ny fotoana mety.
Tsy hoe ao anatin'ny fifandraisana iray dia olona iray ihany no manana izany fahefana izany ary ny iray hafa kosa mametra fotsiny ny fanekeny ny fanapahan-kevitry ny hafa. Rehefa mandeha ny fotoana, ny fanjakazakana toy izany dia mety hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny mpiara-miasa sy mahatonga ny fifandraisana ho malemy mampidi-doza.
Olana noho ny adim-pahefana eo amin'ny mpivady
Ny tolona herinaratra mitranga matetika ao anatin'ny mpivady, mety hiteraka olana marobe ity:
Mety hitranga fa ny tolona herinaratra dia noho ny olona roa te handray ny andraikitra lehibe. Samy te ho marina amin'ny fotoana rehetra ny olona roa, ka miteraka fifandirana sy ady mandritra ny ora tontolo andro. Samy tsy manome ny tanany hamily izy roa ary izany dia mahatonga ny fiainana miaraka ho tena sarotra sy sarotra. Amin'ireto tranga ireto dia zava-dehibe ny fiaraha-miory amin'ny mpiara-miasa arak'izay tratra ary apetraho amin'ny kiraron'ny iray hafa.
Toy izany koa, ny fifanolanana samy hafa dia mety hitranga raha tsy misy olona ao anatin'ny mpivady, te handray fahefana sy fahefana. Ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ao amin'ny mpivady dia miharihary ary manimba ny fifandraisana izany. Amin'ity tranga ity dia ilaina ny mampiharihary ireo hevitra samy hafa ary avy eo dia mandray andraikitra miaraka.
Raha fintinina, ny tolona herinaratra ao anatin'ny mpivady dia azo raisina ho toy ny mahazatra ary tsy tokony ho zavatra ratsy, raha mbola tsy mitondra fahavoazana amin'ny ampahany hafa amin'ny mpivady ny fanapahana sy fahefana toy izany. Tsy maintsy misy fifandanjana eo amin'ny hery ananan'ny olona tsirairay ao anatin'ny fifandraisana. Ny tsy tsara ho an'ny mpivady dia ity fitsinjaram-pahefana ity no mahatonga ny fifandonana mitohy amin'ny karazana rehetra.
Raha mitranga izany dia ilaina ny mipetraka ary miresaka am-pitoniana ary mametraka andiana fifanarahana arakaraka ny hoe iza no manjaka ao anatin'ny mpivady. Raha ny tokony ho izy dia hanova tanana ny fahefana araky ny fanapahan-kevitra samihafa tsy maintsy raisina ao anatin'ny fifandraisana. Raha tsy izany dia mety hanjary tsy ho zaka ny zava-misy amin'ny zava-dratsy rehetra aterak'izany ho an'ny mpivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny fiantraikan'ny adin'ny fahefana amin'ny mpivady
Tombontsoa azo amin'ny fahazarana mandeha